ကွီး ၆ ကွီးရဲ့ ဗဟိုခံစဈမှာ ဘယျသူက အခြှနျထှကျဆုံးအတှဲဖွဈနပွေီး ဘယျသူတှကေ ဘိတျဆုံးအတှဲဖွဈနသေလဲ? – Sports A2Z
သွဂုတျလ ၁၄ နမှေ့ာ ပွနျလညျကငျြးပတော့မယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျရာသီသဈမှာ ကွီး ၆ ကွီးအသငျးတှရေဲ့ ဖြျောဖွမှေုတှဟော ပရိသတျတှရေဲ့ စိတျအခုနျရဆုံးအဖွဈ စောငျ့မြှျောခွငျးခံနရေသလို နောကျ ၃ ပတျဝနျးကငျြမှာ ဘယျအသငျးက ဖားလဲ၊ ဘယျအသငျးက ငါးလဲဆိုတာ မောငျးတငျလာတော့မှာပါ။
ဗဟိုခံစဈကို ဦးစားပေးအငျအားဖွညျ့နတေဲ့ ၆ သငျးစလုံးရဲ့ လှုပျရှားမှုတှကေ အပွောငျးအရှစြေ့ေးကှကျမှာ မကျြဝါးထငျထငျရှိနပွေီး ဘယျသူကအုပျစိုးမယျ့ရာသီဖွဈလာမလဲဆိုတာကတော့ ​ကွိုတငျစိတျလှုပျရှားဖို့ ကောငျးနသေလို ၆ ကွီးရဲ့ ဗဟိုခံစဈမှာ ဘယျသူက အခြှနျထှကျဆုံးအတှဲဖွဈနပွေီး ဘယျသူတှကေ ဘိတျဆုံးအတှဲဖွဈနသေလဲဆိုတာကတော့ ​ကွိုတငျသုံးသပျမှုတှလေညျး အခုလိုရှိနပေါတယျ။
၆။ ခရစ်စတီယနျ ရိုမဲရိုး+ဂြိုး ရိုဒနျ
EPL ရဲ့ ကွီး ၆ ကွီးမှာ ဗဟိုခံစဈ​ကွောငျးမှာ စပါးဈရဲ့လူအငျအားက အားအပြော့ဆုံးလို့ သတျမှတျခံထားရပွီး ပေါငျသနျး ၄၀ နဲ့ စီးရီးအကေနေ ပွောငျးရှလေ့ာတော့မယျ့ အာဂငျြတှးနားသား ရိုမဲရိုက ယူရိုမှာ ​ပါရမီရှငျခွစှေမျးမြိုး ပွသခဲ့တဲ့ အသကျ ၂၃ နှဈအရှယျ ဝေးလျသား ရိုဒှနျနဲ့ တှဲဖကျပွီး နညျးပွ နူနို အကျဈပီရီတို ဆနျးတို့ဈရဲ့ ခံစဈကို ဦးဆောငျသှားရဖို့ ရှိနပွေီး သငျယူစရာတှေ ပွညျ့နှကျနဥေီးမယျ့ရာသီလို့ အဆိုပွုခံထားရပါတယျ။
အာဆငျနယျရဲ့ ပေါငျသနျး ၅၀ တနျ ဘနျဝှိုကျက ဘရိုကျတနျကနေ တရားဝငျမရောကျလာသေးပမေယျ့ အခြိနျတခုအတှငျးမှာ အသကျ ၂၃ နှဈသားက ဂနျးနားတယောကျဖွဈလာဖို့ သခြောနပေါပွီ။ သူက အသကျ ၂၃ နှဈခငျြး ရှယျတူဖွဈတဲ့ ဘရာဇီးလျသား ဂါဘရီယယျလျနဲ့ ခံစဈကို ဦးဆောငျသှားရဖို့ ရှိနပွေီး အာဆငျနယျရဲ့အနာဂတျအဖွဈ တောကျပလာမလားလို့ သူတို့အတှဲဟာ စောငျ့ကွညျ့ခံအနအေထားမှာ ထညျ့သှငျးခံထားရပါတယျ။
၄။ သီယာဂို ဆေးလျဗား+အနျတိုနီယို ရူဒီဂါ
ခနျြပီယံလိဂျခနျြပီယံအတှဲက အဆငျ့ ၄ နရောအထိ ရောကျရှိနတောကိုတော့ ခယျြလျဆီးပရိသတျတှကေို ရှငျးပွစရာရှိနပွေီး ဆေးလျဗားက အသကျ ၃၈ နှဈထဲ ရောကျလာလို့ ဦးဆောငျနိုငျစှမျးကလှဲရငျ သကျလုံအကပြိုငျးမှာ ရှိနတေဲ့အပွငျ ရူဒီဂါက တရာသီလုံး ​ခွစှေမျးမတညျငွိမျဘူးဆိုတဲ့ သုံးသပျခကျြတှကေ ရှိနပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ တူဟယျလျအနနေဲ့ လူသဈဗဟိုခံစဈမှူးကို ရှာဖှပွေီး အသငျးခံစဈကို အထိုငျခဖြို့ အသှကျဆုံးလှုပျရှားနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ EPL ခနျြပီယံဆုဖလားကို ဒီရာသီမှာ မမှိတျမသုနျစိနျချေါသှားဖို့ ရိုမနျ အဘေရာမိုဗဈချြတို့ အုပျစုက စိုငျးပွငျးနသေလို တူဟယျလျက တကယျလုပျဆောငျနိုငျမလားဆိုတာလညျး ထငျကွေးတှနေဲ့အတူ စိတျဝငျစားစရာကောငျးနတောပါ။
၃။ ဗာဂြီးလျ ဗနျဒိုကျ+အီဘရာဟီမာ ကိုနာတေ
သူတို့အတှဲကိုတော့ အနညျးငယျသတိပွုစရာတှေ ရှိနပေါတယျ။ ဒူးဒဏျရာကွောငျ့ ၁ နှဈကွာနားထားရတဲ့ ဗနျဒိုကျက အရငျလိုခွစှေမျးနဲ့ ပွနျလာနိုငျပါ့မလား? ပေါငျ ၃၆ သနျးတနျ ၂၂ နှဈသားလူငယျလေး ကိုနာတကေ EPL ခကျြခငျြးအထိုငျကနြိုငျပါ့မလား? ဒီ​မေးခှနျးတှကေ ယောကျယကျခတျနဆေဲပါ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ဟာသာဘာလငျနဲ့ ရာသီကွိုပှဲမှာ ပှဲထှကျလာမယျ့ ဗနျဒိုကျကိုတော့ စောငျ့ကွညျ့သှားရမှာပါ။
၂။ ဟာရီ မကျဂှိုငျးယား+ရာဖေးလျ ဗာရှနျး
ဒီအတှဲကို နံပါတျ ၂ နရောပေးခဲ့လို့ ယူနိုကျပရိသတျတှေ စိတျပကျြစရာဖွဈမလားတော့ ယူဆမိပမေယျ့ ဘယျလောကျဟော့နနေေ သကျသမေပွရသေးတဲ့ အတှဲဖွဈနတောပါ။ မကျဂှိုငျးယားကလညျး အမွငျ့ဆုံး​ခွစှေမျးရှိနပွေီလို့ ဆိုဖို့ ခကျနသေေးသလို အသကျ ၂၈ နှဈသား ဗာရှနျးရဲ့ အတှအေ့ကွုံအငျအားကတော့ မြှျောလငျ့စရာတှကေို ယူဆောငျလာဖို့ သခြောနပေါတယျ။
၁။ ရူဘငျ ဒီယကျဈ+ဂြှနျစတုနျးဈ
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂျဗိုလျဝငျခံခဲ့တဲ့ မနျစီးတီးဗဟိုခံစဈအတှဲကို နံပါတျ ၁ နရောမှာ မထားမဖွဈ ထားရမှာပါ။ ပွိုငျဘကျအသငျးတိုငျးကို ဖွုံကသြှားစခေဲ့တဲ့ EPL ရဲ့ အမာကြောဆုံးနဲ့ ပေးဂိုးအနညျးဆုံးအတှဲအဖွဈ မှတျတမျးဝငျထားသလို ဒီယာ့ဈရဲ့ ဒိုငျခံဘောလုံးရှငျးထုတျမှု၊ စတုနျးဈရဲ့ ခံစဈကနေ ဘောလုံးကိုငျကစားနိုငျစှမျးတှကေ အတျောလေးဟနျခကျြညီမြှခဲ့တာပါ။
သြဂုတ်လ ၁၄ နေ့မှာ ပြန်လည်ကျင်းပတော့မယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီသစ်မှာ ကြီး ၆ ကြီးအသင်းတွေရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်အခုန်ရဆုံးအဖြစ် စောင့်မျှော်ခြင်းခံနေရသလို နောက် ၃ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်အသင်းက ဖားလဲ၊ ဘယ်အသင်းက ငါးလဲဆိုတာ မောင်းတင်လာတော့မှာပါ။
ဗဟိုခံစစ်ကို ဦးစားပေးအင်အားဖြည့်နေတဲ့ ၆ သင်းစလုံးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေက အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ မျက်ဝါးထင်ထင်ရှိနေပြီး ဘယ်သူကအုပ်စိုးမယ့်ရာသီဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့ ​ကြိုတင်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းနေသလို ၆ ကြီးရဲ့ ဗဟိုခံစစ်မှာ ဘယ်သူက အချွန်ထွက်ဆုံးအတွဲဖြစ်နေပြီး ဘယ်သူတွေက ဘိတ်ဆုံးအတွဲဖြစ်နေသလဲဆိုတာကတော့ ​ကြိုတင်သုံးသပ်မှုတွေလည်း အခုလိုရှိနေပါတယ်။
၆။ ခရစ္စတီယန် ရိုမဲရိုး+ဂျိုး ရိုဒန်
EPL ရဲ့ ကြီး ၆ ကြီးမှာ ဗဟိုခံစစ်​ကြောင်းမှာ စပါးစ်ရဲ့လူအင်အားက အားအပျော့ဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံထားရပြီး ပေါင်သန်း ၄၀ နဲ့ စီးရီးအေကနေ ပြောင်းရွှေ့လာတော့မယ့် အာဂျင်တွးနားသား ရိုမဲရိုက ယူရိုမှာ ​ပါရမီရှင်ခြေစွမ်းမျိုး ပြသခဲ့တဲ့ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ဝေးလ်သား ရိုဒွန်နဲ့ တွဲဖက်ပြီး နည်းပြ နူနို အက်စ်ပီရီတို ဆန်းတို့စ်ရဲ့ ခံစစ်ကို ဦးဆောင်သွားရဖို့ ရှိနေပြီး သင်ယူစရာတွေ ပြည့်နှက်နေဦးမယ့်ရာသီလို့ အဆိုပြုခံထားရပါတယ်။
အာဆင်နယ်ရဲ့ ပေါင်သန်း ၅၀ တန် ဘန်ဝှိုက်က ဘရိုက်တန်ကနေ တရားဝင်မရောက်လာသေးပေမယ့် အချိန်တခုအတွင်းမှာ အသက် ၂၃ နှစ်သားက ဂန်းနားတယောက်ဖြစ်လာဖို့ သေချာနေပါပြီ။ သူက အသက် ၂၃ နှစ်ချင်း ရွယ်တူဖြစ်တဲ့ ဘရာဇီးလ်သား ဂါဘရီယယ်လ်နဲ့ ခံစစ်ကို ဦးဆောင်သွားရဖို့ ရှိနေပြီး အာဆင်နယ်ရဲ့အနာဂတ်အဖြစ် တောက်ပလာမလားလို့ သူတို့အတွဲဟာ စောင့်ကြည့်ခံအနေအထားမှာ ထည့်သွင်းခံထားရပါတယ်။
၄။ သီယာဂို ဆေးလ်ဗား+အန်တိုနီယို ရူဒီဂါ
ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံအတွဲက အဆင့် ၄ နေရာအထိ ရောက်ရှိနေတာကိုတော့ ချယ်လ်ဆီးပရိသတ်တွေကို ရှင်းပြစရာရှိနေပြီး ဆေးလ်ဗားက အသက် ၃၈ နှစ်ထဲ ရောက်လာလို့ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းကလွဲရင် သက်လုံအကျပိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့အပြင် ရူဒီဂါက တရာသီလုံး ​ခြေစွမ်းမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေက ရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် တူဟယ်လ်အနေနဲ့ လူသစ်ဗဟိုခံစစ်မှူးကို ရှာဖွေပြီး အသင်းခံစစ်ကို အထိုင်ချဖို့ အသွက်ဆုံးလှုပ်ရှားနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ EPL ချန်ပီယံဆုဖလားကို ဒီရာသီမှာ မမှိတ်မသုန်စိန်ခေါ်သွားဖို့ ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျတို့ အုပ်စုက စိုင်းပြင်းနေသလို တူဟယ်လ်က တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတာလည်း ထင်ကြေးတွေနဲ့အတူ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတာပါ။
၃။ ဗာဂျီးလ် ဗန်ဒိုက်+အီဘရာဟီမာ ကိုနာတေ
သူတို့အတွဲကိုတော့ အနည်းငယ်သတိပြုစရာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် ၁ နှစ်ကြာနားထားရတဲ့ ဗန်ဒိုက်က အရင်လိုခြေစွမ်းနဲ့ ပြန်လာနိုင်ပါ့မလား? ပေါင် ၃၆ သန်းတန် ၂၂ နှစ်သားလူငယ်လေး ကိုနာတေက EPL ချက်ချင်းအထိုင်ကျနိုင်ပါ့မလား? ဒီ​မေးခွန်းတွေက ယောက်ယက်ခတ်နေဆဲပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဟာသာဘာလင်နဲ့ ရာသီကြိုပွဲမှာ ပွဲထွက်လာမယ့် ဗန်ဒိုက်ကိုတော့ စောင့်ကြည့်သွားရမှာပါ။
၂။ ဟာရီ မက်ဂွိုင်းယား+ရာဖေးလ် ဗာရွန်း
ဒီအတွဲကို နံပါတ် ၂ နေရာပေးခဲ့လို့ ယူနိုက်ပရိသတ်တွေ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်မလားတော့ ယူဆမိပေမယ့် ဘယ်လောက်ဟော့နေနေ သက်သေမပြရသေးတဲ့ အတွဲဖြစ်နေတာပါ။ မက်ဂွိုင်းယားကလည်း အမြင့်ဆုံး​ခြေစွမ်းရှိနေပြီလို့ ဆိုဖို့ ခက်နေသေးသလို အသက် ၂၈ နှစ်သား ဗာရွန်းရဲ့ အတွေ့အကြုံအင်အားကတော့ မျှော်လင့်စရာတွေကို ယူဆောင်လာဖို့ သေချာနေပါတယ်။
၁။ ရူဘင် ဒီယက်စ်+ဂျွန်စတုန်းစ်
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဗိုလ်ဝင်ခံခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးဗဟိုခံစစ်အတွဲကို နံပါတ် ၁ နေရာမှာ မထားမဖြစ် ထားရမှာပါ။ ပြိုင်ဘက်အသင်းတိုင်းကို ဖြုံကျသွားစေခဲ့တဲ့ EPL ရဲ့ အမာကျောဆုံးနဲ့ ပေးဂိုးအနည်းဆုံးအတွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ထားသလို ဒီယာ့စ်ရဲ့ ဒိုင်ခံဘောလုံးရှင်းထုတ်မှု၊ စတုန်းစ်ရဲ့ ခံစစ်ကနေ ဘောလုံးကိုင်ကစားနိုင်စွမ်းတွေက အတော်လေးဟန်ချက်ညီမျှခဲ့တာပါ။
“ရာဇဝငျထဲမှာ အကွီးမွတျဆုံးက ဒိုကွီးပါ” – ဇလာတနျ အီဘရာဟီမိုဗဈချြ